Dilka Maafiyada Ee Riday Xukuumaddii Slovakia – somalilandtoday.com
Miiska uu ku shaqeeyo Jan Kuciak sidiisi ayuu ahaa maalin ka dib markii ugu dambaysay shaqada. Waxaa dul saarnaa bug ka hadlaya qoyska talyaaniga ah ee “maafiyada Ndarangheta”.
Laakin noloshiisa ayey galaafatay. Isaga iyo gabadha ay saaxibka yihiin ayaa meydadkooda oo ay rasaas ku taallo waxaa laga helay meel u dhow aqalkooda, tuulada Vel’ka Macao o ku taalla duleedka caasimadda Bratislava. Waxay jireen 27 sano.
Waxaa ku lug leh dad la kiraysto, shiishyahanno, siyaasiyiin, iyo qolyaha lacagaha raadraacooda baabi’iya, waxayna warbixintu tilmaamaysaa in maafiyada ay ku fidday meelo aad uga baxsan talyaaniga.
Lahaanshaha sawirkaAFP/GETTYImage captionka hor intii uusan is casilin ra’iisul wasaare Roberto Fico
Dibadbaxyo xoog leh ayaa ka dhacay waddooyinka Bratislava, kuwaasoo markii dambe horseeday in xukuumaddu ay dhacdo bishii Maarso, waxaana markaa hogaaminayey ra’iisul wasaare Roberto Fico.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @RSF_inter
#Slovakia: RSF appalled by investigative reporter’s murder in Slovakiahttp://bit.ly/2CmGXf1
4:59 AM – Feb 26, 2018
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @RSF_inter
Labada la taliye waxay u shaqaynayeen ra’iisul wasaare Fico, walow aysan jirin wax caddayn ah oo muujinaysa inuu ogaa xiriirkaas.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionBooliska oo baaraya guriga Antonio Vadala ee Slovakia
Kuciak wuxuu ogaaday in Antonio Vadala uu ka tirsan yahay qolyaha reer Vadala ee aadka looga baqo, ee saldhigoodu yahay magaalada yar ee Bova Marina oo ku taalla koofurta Talyaaniga. Qoyskaas wuxuu ka mid yahay 150 qoys oo la isku yiraahdo reer “Ndrangheta”.
Image captionMaamulka Bova Marina waxay aad uga cabanayaan Ndrangheta
Waxay kaloo koontarobaan ahaan u kala safriyaan dadka iyo xubnaha bani’aadmiga, waxayna lacago balaayiin ah si sharci darro ah uga helaan midowga Yurub iyo dawladaha hoose.
“Ndrangheta waxaa isku keenay dhalasho iyo dhiig, wayna adag tahay in la dhex galo” ayuu yiri Gratteri oo dacwado ku soo oogay in ka badan 6000 oo maafiya ah, muddo 35 sano ah oo hawshan uu ku jiray.
Image captionNicola Gratteri wuxuu sheegayaa in aan la dhex gali karin maafiyada Ndrangheta
Condofuri oo xuduud la leh Bova Marina, dibadda xarunta dawladda hoose waxaa ku qoran “Ndarangheta halkan ma geli karaan”.
“Dadkeenni ugu wanaagsanaa waxaa khasab ku noqotay inay meeshan quruxda badan isaga tagaan. Tani waa gunta dhibaatada na haysata. Culayska dhabarka noo saaran ayaa ah Ndarangheta” ayuu yiri.
“Sababo aad macquul u ah ayaa jira oo aan ugu malayn karno …London inay ka mid tahay meelaha ay hantida ka iibsadaan oo ay maalgashadaan” sidaa waxaa yiri G/sare Emilio Fiora oo ka tirsan Guardia.
“Magaalada London waa xarun weyn oo dhaqaale, sidaa darteed waa caadi in maalin kasta lacag uu xaddigeedu aad u badan yahay la isku dhaafsado London oo ay soo gasho ama ka baxo” ayey tiri.
Nicola Gratteri wuxuu ugu baaqay hay’adaha hirgalinta sharciga ee dunida inaysan dhayalsan khatarta sii kordhaysa ee kooxda Ndrangheta.
“Haddii balaayiinta Yuuro ee Ndrangheta ay ka sameeyaan iibinta kookaayiinta ay qayb ka noqoto dhaqaalaha rasmiga ah, waxay qarxin karaan dhaqaalaha, waxayna baabi’in karaan dimoqaraadiyadda” ayuu digniin ku bixiyey.